Currant | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Black currant bushes bụ ezi mma nke atụmatụ dacha, na-abụghị, ha na-atọ ụtọ tomato bara uru, nke a na-eji maka ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụrụ na ịmepụta nkwadebe nke jam na jams, ọ na-apụta na a na-ahapụkarị nchịkọta ahụ iji nweta nsị. Ka anyị lee ihe ha bara uru maka na otu esi eme ya n'onwe gị.
Otu esi akụ na ilekọta currants black
Kedu uru uru nwa currant bara? Black currant na-atụle otu n'ime ndị kasị bara uru na tọrọ ụtọ tomato. A na-eji currant mee ihe na ọgwụ, nri. A na-eji ya maka igbochi ọrịa ụfọdụ. Black currant na-enye ahụ mmadụ dị iche iche vitamin (A, vitamin nke E, B, C, H), microelements (fluorine, iron, iodine, copper, cobalt, zinc, manganese), macrocells (calcium, potassium, phosphorus, calcium).
Ọ ghọọ omenala anyị n'oge okpomọkụ iji kpokọta nwa currant tomato na-acha uhie uhie tomato. Ọ bụ ụdị abụọ currants ndị ahụ nwere ogologo oge na mgbọrọgwụ anyị. Ma mmadụ ole na ole maara banyere ụdị dị iche iche nke beri a - currant ọlaedo, aha nke abụọ bụ "krandal". A na-ewere North America dị ka ebe a mụrụ ebe ụdị currant dị, ebe ebe dị n'etiti ebe ugwu na ọdịda na Mexico, osisi ndị a na-eto n'onwe ha, n'enweghị enyemaka mmadụ.
Esi esi na-emeso currants site na oria
Currant bụ osisi shrub nke nwere ike iru 2.5 mita n'ịdị elu. Nri Currant nwere ezé buru ibu n'akụkụ nsọtụ, tomato na-eru ruo 1 cm na dayameta ma nwee ike dị mma. Currants nwere ike itolite na ndò, mana ebe dị mma karị ga-abụ ala n'ime ebe anwụ na-acha. Akwụkwọ tomato na-agụnye ọtụtụ vitamin, mmiri ọgwụ acid, micro-na macronutrients.
Olee otú iji chebe currants si pests
Anyị na-anabata ndị hụrụ ubi a! Isiokwu a ga-elekwasị anya na nje pests. Anyị ga-agwa gị banyere ihe onye ọ bụla na-efe bụ, olee otú ọ ga-esi mee ka ohia gị nwee ike ịlụ ọgụ na otu esi agba ya. Ị ma? A na-eji ihe ọṅụṅụ na-edozi ahụ edozi ihe eji eri nri.
Iwu ole na ole na aro maka nlekọta na-acha ọcha currant
Taa, anyị ga-ekwu okwu banyere currants. Anyị ga-agwa gị otu esi akụ mkpụrụ na-acha ọcha na mmiri, họrọ ebe ịkụ na ala kwesịrị ekwesị. Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ga-enwe ihe ọmụma zuru oke iji mee ka currants na-amị mkpụrụ ma na-amị mkpụrụ. Ị ma? Currant na-ezo aka n'usoro nke Camouflaged.
Black currant: anyị na-akụ, anyị na-eto, anyị na-ewe ihe ubi
A na-achọta currants n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ubi ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ bụ nnukwu beri. Ụdị currant ojii ahụ bụ ihe kachasị mma n'etiti ndị ọzọ (acha ọbara ọbara na ọlaedo). Black currant nwere ọgaranya na vitamin ma jiri okpukpu 5 karịa strawberries, mkpụrụ citrus site ugboro 8, apụl na pears site ugboro 10, na mkpụrụ vaịn site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100.
Esi chebe currants gị site na ọrịa na pests
Ihe ka ndi oru ugbo na ndi nwe ala choro ka ohia. N'ebe ka anyi na ezute umuaka oji (Ribes nigrum), uhie (Ribes rubrum) na currant currant (Ribes niveum), na-acha odo odo na nso nso a. Ọrịa Currant na ọgwụgwọ ha Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ohia gị nwee obi ụtọ na tomato site n'afọ ruo n'afọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ama ọ bụghị nanị banyere isi mkpịsị aka nke nlekọta, kamakwa currants na pests nke currants.
Esi tufuo aphids na currants
Currant bụ otu n'ime ihe ndị na-emekarị beri bọrọ n'ubi anyị. Ndị na-elekọta ubi maka ndị a na-ahụ maka nlekọta na-elekọta, lush, elu na-atọ ụtọ na tomato, ndị bara ọgaranya na vitamin. Maka ịgha mkpụrụ nke ihe ubi kwesịrị ịkọwa otu esi emeso aphids na currants - a na-ahụkarị pesti.
Esi lekọta currants na ọdịda, nke gụnyere nlekọta ndị isi
Currant bụ otu n'ime mkpụrụ osisi ndị kacha atọ ụtọ, na-elekọta osisi nke onye ọ bụla na-elekọta ubi nwere ike ime na a chọrọ ya n'oge ụbịa. Enwere ike ịchọta ya na nri na na nkà mmụta ọgwụ. Ke akpa ikpe, compote na jam na-sie site na currant tomato, iwesa ọhụrụ, ọbụna currant epupụta na-eji maka ichebe, na teas í teas breed ha.
Na-elekọta currants na mmiri: kwachaa, nri, nchedo site na ọrịa na pests
Black, na-acha uhie uhie na ọbụna na-acha ọcha currants bụ ihe a na-ewu ewu n'ubi na anyị latitudes, Ya mere, ọtụtụ ndị bi n'oge okpomọkụ nwere mmasị na currant nlekọta mgbe oyi. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere nuances nke ịkụchasị, ịzụta nri, ịsa mmiri na nhazi site na pests nke osisi ndị a, na-ebikwa na esemokwu nke ichebe osisi sitere na mmiri frosts.
Gịnị bụ uru uhie currant: ọgwụ na ọgwụ na contraindications
Obere ụyọkọ ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na tomato na mpaghara anyị abụghị ihe ọhụrụ. Ha nwere ike ịchọta ha na ihe ọ bụla. Na ihe nile n'ihi na osisi ndị a na-adịghị mma nwere ike ịgwọ ọrịa nke ihe ngwọta nke vitamin na mineral. Ọbụna ndị nna nna anyị kpọrọ mkpụrụ osisi uhie ha bụ isi iyi mara mma, ike na ogologo ndụ.
Kedu ihe bara uru nwa currant: ịgwọ ọrịa na njigide
Enweghi ike ighota ihe ozo. Ozugbo ị na-eche ya na ndụ gị, ị ga-echeta ya ruo mgbe ebighị ebi. Osisi, akwukwo, osisi - ihe nile juputara na ogwu a. Ya mere, na Russia, a na - akpọkarị beri a "currant" (na Old Church Slavonic, "isi ike"). Na mgbakwunye na isi, ọ bụ ama maka àgwà pụrụ iche pụrụ iche.
White currant: kalori ọdịnaya, mejupụtara, bara uru Njirimara na contraindications
A na-ejikọta currant na ụdị isi abụọ - nwa na ọbara ọbara. Nke mbu, dịka ị maara, nwere ọtụtụ ihe ndị bara uru, mana maka àgwà ọma nke onye ọ bụla na-eri onwe ya. White currant bụ ụdị ihe ọkụkụ dị nnọọ njọ karị, ma, site na ya uru, ọ dịtụghị dị ala karịa "onye ikwu" ọbara ọbara.
Ntụziaka na-ewu ewu nke na-eme ka nwa mmanya currant na-arụ n'ụlọ
Wine kachasị mma - esi ya aka ya. Otu n'ime tomato ndị a na-ewu ewu maka ịṅụ ihe ọṅụṅụ bụ currant. Mgbe ị gụsịrị isiokwu ahụ, ị ​​ga-amụta otú e si eme mmanya na-acha ọbara ọbara. Black Currant Wine: Efrata List Ịme ihe ọṅụṅụ mmanya na-arụ n'ụlọ bụ usoro dị mgbagwoju anya.
Otu esi emeso akwa ajari na currants
Rust bụ otu n'ime ọrịa ndị kachasị dị ize ndụ maka currants na gooseberries. Nkọwa, nyocha, ọgwụgwọ - anyị ga-agwa ya n'okpuru. Ihe ize ndụ nke nchara Osisi ahụ nwere ọrịa na-amalite ịhapụ epupụta, àgwà tomato na-arịwanye elu, na mgbochi nsị na-ebelata. Na usoro ihe eji eme ihe na-edozi ahụ, enwere nsogbu, ọnwụ ga-apụ n'anya, mmiri evaporation na-abawanye.
Esi eweputa currants
Na-enweghị mmeghachi afọ kwa afọ, osisi ndị na-amị mkpụrụ agaghị enwe ike iji ikike zuru ezu ha nwere maka mkpụrụ osisi dị ukwuu. Na ihe niile n'ihi na mkpụrụ osisi ahụ na-agbanye alaka alaka nke afọ gara aga, nke na-erughị afọ ise. Ọ bụ ya mere ọ dị ezigbo mkpa iji wepụ ndị agadi niile, kpọrọ nkụ, mebie emebi, na-asọmpụ ibe ha ma na-egbochi mkpụmkpụ nke ihe ọhụrụ.
Agbara powdery mildew akara maka currants
Mkpụrụ Mealy (na okwu ndị ọzọ, uyi ma ọ bụ ntụ) bụ ọrịa na-akpata ọrịa microscopic nke na-ebi n'ala - usoro nke erysipelas powdery. Currant na-ata ahụhụ site na ero a. Mmiri Mealy na-emetụta akụkụ nke osisi nke dị n'elu ala - akwụkwọ, petioles, buds, seedlings na Ome nke afọ a, yana ebe na-eto eto.
Anyị na-eto eto site na cuttings na saplings
Currant bụ osisi shrub nke goozberị ezinụlọ. Usoro nke ịgha mkpụrụ na ilekọta mkpụrụ osisi chọrọ ezigbo ihe ọmụma na nkà. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na esi akụ mkpụrụ ndụ mmiri na mmiri, yana inye ntụziaka site na nhazi. Mgbe ị na-akụ n'oge mgbụsị akwụkwọ oge mbụ bụ oge kachasị mma maka ịgha mkpụrụ, ebe ọ bụ na n'oge oyi, ala gbara gburugburu ebe ndị na-ata ahịhịa ma na-eto, nke na-eme ka e nwee ọganihu dị mma nke beri.
Esi kwadebe currants maka oyi
Black currant bụ ezigbo vitamin bombu n'etiti tomato. Ọ na-enye ahụ mmadụ na vitamin C, B, PP, K, E, H, A, na ihe ndị ọ na-eme jupụtara n'ụdị nri ndị dị ka ígwè, organic, phosphoric na ascorbic acid, pectins, potassium, calcium. Ọ na-adọrọ mmasị na ọ bụghị nanị na tomato, kamakwa currant epupụta nwere mmetụta ọgwụgwọ.
Iji mee ka mkpụrụ osisi gị nwee ezigbo owuwe ihe ubi, ịkwesịrị ilekọta ya, na usoro nchịkwa na-agụnye ebe a. Otu n'ime ihe ndị a kasị mara amara nke currants - shieldka. Na-enweghị njikwa oge, ụmụ ahụhụ ndị a nwere ike imebi osisi ahụ n'enweghị ihe ọ bụla. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ụzọ ndị a na-esi na-asọ oyi, ụzọ nke ịchịkwa ọrụ na mgbochi.
Ihe ọbọgwụ na-atụgharị na ihe ha ga-eme
Kedu ka ị ga-esi mee ka ugbo sie n'ụlọ na oven na eletrik eletrik: usoro ntụziaka ejiji
Ezigbo sọrel. Enwere ike iri nri na otu esi etolite anya?
Ntuziaka maka otu esi esi nri nri broiler
Smokehouse maka ọkụ na oyi na-atụ smoked, ha atụmatụ
Ndụ na-akwado ọlaọcha Acacia
Ihe niile gbasara ụdị ala hụrụ radishes na otú e si eme ka ala ahụ dị mma maka ịmị akwụkwọ nri